Ciidamada Badda Talyaaniga oo soo bad baadiyay boqolaal muhaajiriin Afrikaan ah oo badda ku go’doonsanaa | Salaan Media
Ciidamada Badda Talyaaniga oo soo bad baadiyay boqolaal muhaajiriin Afrikaan ah oo badda ku go’doonsanaa
Ciidamada badda Talyaaniga ayaa soo bad baadiyay ilaa shan boqol oo muhaajiriin Afrikaan ah oo u badan Soomaali iyo Eretrea, kuwaasoo labadii maalmood ee u dambeeyay ku go’doonsanaa xeebaha u dhaxeeya Liibiya iyo Talyaaniga.
Ciidamada ilaalada xeebaha iyo Maraakiib ganacsi laga leeyahay dalka Talyaaniga ayaa ku guuleystay inay soo bad baadiyaan ilaa labo doomood oo ay kala saarnaayeen 109 muhaajiriin ah iyo 111, kuwaasoo shalay qeyla dhaan u soo dirsaday Ciidamada Ilaalada Xeebaha Talyaaniga.
Wararka ayaa sheegaya in Labo doomood oo mid ka mid ah ay saarnaayeen 110 muhaajiriin ah ayaa la sheegay in dhinaca Talyaaniga loo soo wado, kuwaasoo laga soo kaxeeyay xeebaha dalka Liibiya.
Ciidamada Badda Talyaaniga oo aan awood u laheyn inay tagaan xeebaha Liibiya ayaa waxay u direen maraakiib ganacsi laga leeyahay dalka Talyaaniga, si ay u soo bad baadiyaan doomaha ku xayirnaa xeebaha Liibiya.
Inkastoo todobaad ay ka soo wareegatay musiibadii ka dhacday jaziirada Lampedusa oo ay ku dhinteen ilaa saddex boqol oo qof ayaa waxaa kala joogsi laheyn doomaha Liibiya ka soo baxaya ee ku soo qul qulaya xeebaha koofuirta Talyaaniga.